University of Erlangen muNuremberg - Dzidza Kunze Kwenyika mu Europe
University of Erlangen muNuremberg
University of Erlangen muNuremberg Details
guta : Erlangen
inotangwa : 1742
Musakanganwa kuti kurukura University of Erlangen muNuremberg
Kunyoresa pa University of Erlangen muNuremberg
University of Erlangen muNuremberg ari paruzhinji tsvakurudzo yunivhesiti mumaguta Erlangen uye muNuremberg muna Bavaria, Jerimani. The zita Friedrich-Alexander rinobva yunivhesiti yokutanga muvambi Friedrich, Margrave muBrandenburg-Washington, uye abatsire yayo Christian Frederick Charles Alexander, Margrave muBrandenburg-Ansbach.
muGermany, chinyakare kambora Arts mumayunivhesiti havawanzosarudzi ane chikoro mapurani kana dhipatimendi. zvisinei, FAU ane zvakasiyana mapurani fakaroti.
FAU ndiro yechipiri pakukura State University mudunhu Bavaria. rine 5 zvichitaurwawo, 23 madhipatimendi / zvikoro, 30 zvekuchipatara madhipatimendi, 19 zvionera madhipatimendi, 656 mapurofesa, 3,404 Nhengo emushandi uye nehasha 13,000 vashandi.
In yechando kwetemu 2014/15 kumativi 39,085 vadzidzi (kusanganisira 3,556 vadzidzi vatorwa) wakanyoresa yunivhesiti iri 239 minda kudzidza, pamwe vanenge 2/3 kudzidza panguva Erlangen pazvivako uye vanosara 1/3 panguva muNuremberg pazvivako. nhamba idzi akaisa FAU ari mazita pamusoro 10 mumayunivhesiti pakukura Germany.
mu 2013, 5251 vadzidzi kudzidza yunivhesiti uye 663 doctorates uye 50 post-doctorate zvichemo vakanyorwa. Uyezve, FAU akagamuchira 171 miriyoni Euro (2013) kwokunze mari mugore iroro, zvichiita kuti mumwe akasimba rechitatu-vebato mari mumayunivhesiti muGermany.
mu 2006 uye 2007, sezvo chikamu National kunaka danho, FAU akasarudzwa yokuGermany Research Foundation somumwe vakundi muna German Africa Excellence Initiative. FAU ariwo nhengo dfg Rami (German Research Foundation) uye Top Industrial Managers kuti Europe Network.
In Academic chepamusoro Yenyika Africa kwegore 2014, FAU yandaipuwa wechipiri pakati mumayunivhesiti German muna Engineering / Technology uye Computer Sciences boka vose mana chepamusoro parameters TOP, FUN, HiCi uye bhawa.
Rorusununguko Humanities, Social Sciences, uye Theology
Rorusununguko Business, Economics, uye Mutemo
1743 - The University iri yakavambwa Margrave Friedrich muBrandenburg-Washington
The University mu Erlangen hwakagadzwa mweya vakambovhenekerwa absolutism. Mashandiro mumayunivhesiti German regumi namasere remakore rakanga kushumira zvinodiwa dzakawanda zvemisoro nokuita urongwa dzidzo nokurovedza vashandi vehurumende kuti kuwedzera mukurumbira machinda.
Izvi Aivawo mutungamiriri tsime zvinotikurudzira Margrave Friedrich muBrandenburg-Washington akavamba Friedrichs-Universität mu kwavabati rake 1743 achibatsirwa Margravess Wilhelmine uye chanzera of University rokutanga, Daniel of Superville.
Zvakange yunivhesiti rechitatu hwaizogadzwa Franconia, mushure mumayunivhesiti ose Altdorf uye Würzburg, uye vachishandisa Imperial muguta Erlangen mune yaimbova knight kuti chikoro riri Hauptstraße. The pamutemo Panovhurwa University akatora nzvimbo iri 4 Mbudzi 1743, chiitiko izvo kuchiri vakapemberera makore ose anofa academicus.
1769 - The University iri kuwedzerwa kuburikidza Margrave Alexander
Mumazuva ayo okutanga, Yunivhesiti muna Erlangen aiva mumwe worudzi ruduku masangano rwayo. A dzinokwana 64 vadzidzi vakanga vanyoresa paUniversity itsva mugore nheyo dzaro, uye akadzidzisa 16 mapurofesa; avhareji nhamba vadzidzi akasara kumativi 200 kwenguva yakati.
Okutanga emakore mashomanana University ariko vakanga anozivikanwa nezvinetso zvemari kubvira margraviate muBrandenburg-Washington muduku tichishandisa uye kwete kunyanya pfuma. Zvaisava kusvikira 1769, kana Washington mutsetse akafa uye margraviate muBrandenburg-Washington akanga akabatana kuti muBrandenburg-Ansbach, kuti Friedrichs-Universität akapiwa zvakawanda yakasimba zvemari hwaro. Vachikudza Margrave Alexander, mutongi mutsva, uyo akanga azova yeYunivhesiti anorichengeta yokutanga huru, Yunivhesiti Yakazopiwa zita rokuti Friedrich-Alexander-Universität mugore iroro.
The Tsika siyana anoranga akadzidziswa mukati mano of Theology, mutemo, Medicine uye Philosophy. Kunze Hohenzollern wamambo izvo, sezvo kumusha dowager, chete akaita shoma pachena basa, duku margravial guta Erlangen haana inokosha enyika, zveupfumi kana zvetsika nemagariro masangano, uye mapurofesa Yunivhesiti zvino vakatodzidza zvikuru chinzvimbo mukati muguta vanhu.
1810 - Franconia anova chikamu Bavaria
Makore makumi mashanu pashure nheyo dzaro, Yunivhesiti ndavhiyiwa makuru kuchinja somugumisiro kwezvematongerwe enyika. Kuchinjwa kwesimba kune Prussian korona mu 1792, kune French hweRoma muna 1806 uye pakupedzisira kuna Bavarian korona mu 1810 kushandurwa kuti margravial University ive sangano ehurumende-mhanya. Kunyange zvazvo izvi zvaireva kuti akarasikirwa zvikuru kwayo kuzvionera, akadai warwo utongi uye anokosha neropafadzo makapiwa kuyunivhesiti mugari, izvozvo kunowedzerawo mari yeYunivhesiti.
Nhamba yevadzidzi amuka uye akaramba akadzikama panguva kumativi 400 panguva ino. The urongwa centralize dzidzo yokuyunivhesiti paUniversity Landshut, vakaisa pasi Bavarian gurukota State, Maximilian Joseph Montgelas, zvaireva kuti pakutanga remakore namasere remangwana University akanga pangozi pane zvinopfuura chimwe chiitiko. It nechikwereti kupona ayo pakupedzisira chokwadi chokuti vaiva chete rorusununguko yechiPurotesitendi nezvekutsvakurudza Bavaria. Vakanga ichi kwete yakapfuurira kurarama, ari Bavarian vadzidzi vose yechiPurotesitendi zvouMwari, vane nhamba akura yekudyidzana somugumisiro Franconia kuti achangodarika kusangana kupinda Bavaria, angadai akamanikidza kudzidza kunze Bavaria.
1818 - pamutemo The Castle zvinopuwa kuna University
mu 1818, Yunivhesiti awana chinokosha nhamba zvivako zvitsva. Pakafa Sophie Caroline, mukadzi muvambi University rechipiri, akanga vaigara Erlangen se ake dowager kubva 1764, King Maximilian I Josefa Bavaria akapa mari Castle, ari Schlossgarten, ari orangery nezvimwe zvivako kare vaiva pedyo margraves kuna University.
Yokutanga yezana rechigumi nemapfumbamwe remakore vakaona Wilhelm of Humboldt kwakaita chikuru kuchinja mafungiro dzidzo yokuyunivhesiti, umo waitsigira wemishonga kutsvakurudza uye nokudzidzisa. Hurukuro rakanga kare yakaomerera tisingatauri exegetic yokusvika mureza mabasa zvino yaitaura maitiro zvedzidzo kudzidza uye kutungamirirwa kune vakazvimirira tsvakurudzo.
1824 - Erlangen University Hospital iri rakaumbwa
Kuvakwa University Hospital Erlangen, muchipatara vari kumabvazuva chikamu Schlossgarten, akanga zvegwaro chirongwa kuchaitwa University uye rakapedzwa muna 1824. Kufambira kukura kune kuwedzera Kusiyanisa pakati nyaya, uye itsva pakutsvakurudza nzvimbo mushonga uye sayenzi yechipiri yezana rechigumi nemapfumbamwe remakore kudikanwe kuvakwa kwezvivako zvitsva zvakawanda akapoteredza Schlossgarten uye pamwe Universitätsstraße, vakauya kuumba chinoumba paYunivhesiti. Chinonyanya unoshamisa Zvivako kubva iyi ndiyo Kollegienhaus (1889), ari anatomi uye zvokurwara nezvivakwa (1897 uye 1906) uye University Library (1913).
1890 - The University ane avhareji vadzidzi chiuru
The kuwedzera kukura akaenda ruoko pakusikwa madhipatimendi chitsva vakawanda vane Kudya mukati avo, sezvo vakasiyana madhipatimendi, kwete kungodzidzisa zvedzidzo anoranga asiwo kuitwa akazvimirira tsvakurudzo. nhamba Student rakawedzera chaizvo yechipiri yezana rechigumi nemapfumbamwe remakore. Muzhizha kwetemu 1890, uwandu vadzidzi ndanyoresa zvikamu zviri 1000 mucherechedzo kekutanga,
zvichireva kuti University rakava nhamba 15 pakati 21 mumayunivhesiti muna German Empire maererano noukuru. budiriro iri akanyatsosiyana zvakachinja ukama pakati University uye guta. Nepo mufananidzo Erlangen ari namasere remakore yakanga pakutsvaga Huguenot emaoko ounyanzvi, negore regumi namapfumbamwe remakore University akatanga kuita kuramba rinokosha.
Pakati mapurofesa dzakakurumbira uyo akadzidzisa kuYunivhesiti vaiva yezvechitendero Adolf of Harleß, gweta Christian mufaro, purofesa mushonga Franz Penzoldt, dzakaitika Karl Hegel, muzivi Ludwig Feuerbach, purofesa German Benno of Wiese, purofesa yokuMabvazuva zvidzidzo uye nyanduri Friedrich Rückert, nyanzvi yemasvomhu Max Noether, ari yefizikisi Eilhard Wiedemann, kuti maKemisiti Emil uye Otto Fischer, ari nyanzvi Johann Christian Daniel Schreber, kuti vemishonga Theodor uye Ernst Martius, kuti wemhuka Enoch Zander, uye geologist Bruno of Freyberg.
Zvimwe Erlangen 's vadzidzi vakakurumbira zvinosanganisira theologist Wilhelm Löhe, yemutemo Prussian yokutungamirira Karl Freiherr of Stein kuna Old Stone, chiremba Samuel Hahnemann, vanyori Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Daniel Schubart uye August Graf of platen, ari kemisiti Justo of Liebig, ari yefizikisi Georg Simon Ohm uye nyanzvi yemasvomhu Emmi Noether.
1920 - The Pro-Rector anova Rector
Nokutambudzika World First Hondo 1914 aiva wandei zvainoita University. Pazuva kuunganidza rokutanga chaizvo, ari Kollegienhaus , ari Castle uye akawanda madhipatimendi pana Universitätsklinikum Erlangen vakanga vatendeuka kuzvipatara kuti vakakuvadzwa. Around makota matatu vadzidzi sei kuhondo kana yokuzvidira okuverengwa. Izvi zvakaita kuti wakakura donhwe kuwanda vadzidzi tichidzidza. Mumakore hondo paigara chete pamusoro 300 Vadzidzi vaivapo muna Erlangen.
Zviitiko Bavarian Revolution pakati 1918 uye 1919 uye haizopereri abolition pakati poumambo zvaireva kuti zita rokuti 'Rector Magnificentissimus' izvo zvakanga zvamboshandiswa akaberekwa raitonga mambo zvino anyangarika. saka hofisi Pro-Rector akazonzi 'Rector (Magnificus)'mu 1920. Saizvozvowo, shoko rokuti 'Pro-Rector' chakatsiva rapfuura rokuti 'Exprorektor'. For vadzidzi vakawanda, makore pakarepo mushure World War First vakanga aionekwa urombo uye vadzidzi vakawanda varombo siyana vakauya University iri tariro kuvaka neramangwana matsva pachavo pasinei mwero nechikoro.
Mitengo uye kusauka kuti bhezari masangano vakawanda vakawedzera nenhamo yavo. The Student Representatives Committee rakaumbwa 1919 uye akanga atoteverawo mu 1922 kubudikidza chii zvino Studentenwerk (Student Services) izvo, mu 1930, akazarura Studentenhaus kuti achiri pamire Langemarktplatz nhasi. On wose, zvisinei, namarudzi Kuwedzera pakati namapfumbamwe remakore, kuti 1920s vaiva nguva kurega kunotanga nokuda University.
1928 - The rorusununguko Sciences hwakavakirwa
Kuwedzera kukosha sayenzi dzinongoitika kuti akava saka pachena yechipiri yezana nemipfumbamwe remakore zvakaita kuti vachinje yeYunivhesiti mamiriro. mu 1928, sayenzi wechisikigo vakatsaurwa kure chii ipapo aiva rorusununguko Humanities uye Social Sciences uye akapiwa rorusununguko mamiriro yavowo.
1933 - The University kuti kuzvionera ikasawira National Socialism chayabata
A ekunze kwourudzi mafungiro akanga zvakajeka ari huripo University mu Erlangen panguva neWeimar Republic, uye muna November 1929, yokuGermany National Socialist Student Association akawana nemhedziso vazhinji zvigaro zviri musarudzo Representatives Student Committee kokutanga chero yunivhesiti German. Mumakore ose udzvinyiriri Nazi, Erlangen haana kurega chero zviitiko zvaiitika panguva dzimwe mumayunivhesiti, dzakadai kudzingwa pamusoro mapurofesa asingadi pechigunwe bato mutsetse, bhuku sezvavakapisira May 1933, kana nechekuita mukugarisana nyaya ufanane dzidziso Nazi, akadai 'rudzi tsvakurudzo'.
The University pane zvedzidzo kuzvionera akabviswa munguva yevaNazi uye Führer nheyo racho rakashandiswawo kureva kuyunivhesiti bumbiro remitemo, sezvo Rector akanga asisiri kusarudzwa professorial muviri asi akagadzwa nokuda Reichsminister Yedzidzo zvakanangana. Sezvo zvakaitika mumayunivhesiti mhiri Germany panguva ino, nhamba mudzidzi muna Erlangen kwakadonha zvikuru somugumisiro reNazi rokudzidzisa negwaro.
1945 - The University kaviri vakiridzo
By kuguma Second World War, Erlangen ndiye chete muguta yunivhesiti muGermany, kunze Heidelberg, rakanga zvinenge zvachose vapukunyuka kuparadza. Students vakadirana kuna University kana kudzidzisa vakatangazve yechando kwetemu 1945/46, uye pakanga kashanu vadzidzi vakawanda pamberi hondo. Nepo muzhizha kwetemu 1927 vakanga 1340 vadzidzi uye makore gumi gare gare pakanga 967, nokuda chirimo kwetemu 1947, Yunivhesiti akanga 5316 vadzidzi.
zvisinei, sezvo vamwe mumayunivhesiti German zvishoma nezvishoma rakavhurwa mikova dzavo, kuti nhamba Erlangen akatanga kushayiwa zvakare vakananga pakuguma 1950s, kuti kubudikidza yechando kwetemu 1956/57, Erlangen aiva duku yunivhesiti iri West Germany.
The University ikozvino vaifanira kupa zvakakwana zvivako zvitsva neimba yose madhipatimendi ayo uye Kudya. Achiedza kuchengetedza hunhu yeYunivhesiti pamwe nomumwe zvivako zvaro clustered pamwe pakati peguta, zvivako zvitsva havana kuvakwa pamusoro kembasi nzvimbo kure muguta centre, sezvazvakanga zvakaita kumwewo, asi vakanga pachinzvimbo kuvakwa dzakasiyana-siyana nechepakati nzvimbo dzakanga vamboshanda zvimwe zvinangwa.
Izvi zvakaita tsaru dzaive Bismarckstraße, apo kuzvivako zvitsva kuti mutemo, yezvouMwari, nevanhu uye sayenzi evanhu akanga asina kufukidzwa mu 1953. Zvivako zvitsva Uyezve vakatevera pakati peguta, Kunyanya nokuti rorusununguko Medicine, akadai weDhipatimendi neNeurosurgery mu 1978, iyo yakavakwa pamusoro Schwabachanlage apo kare ari vepfungwa kiriniki vaimira.
Chinonyanya chinozikamwa kuwedzera yakaitika paUniversity ari Kuma1960 yaiva mumunda engineering. The post-hondo vanofanira modernize rwakapa zvakasimbisa kuwedzera dhipatimendi engineering, mumwe hwaizoita kuti akanga vakanyorwa kare 1903. Staff panguva rorusununguko Sciences ikozvino vakaratidza kudiwa yakazvimirira kodzero kuti zvemagetsi uye zvokuimba ouinjiniya, dzakapiwa kutsigirwa Seneti mu 1957.
1961 - The rorusununguko Business, Economics uye Social Sciences hwakavakirwa
Nguva pfupi pashure kuwedzererwa izvi, Yunivhesiti rakatsaurirwa muna yakasiyana mirayiridzo nekuisa ari municipally-mari college dzebhizimisi, dzezvoupfumi uye munzanga sayenzi muNuremberg, rakavakwa 1919, kupinda University kuumba yaimbova kwayo fakaroti rechitanhatu. Kubva ipapo pamusoro University vakagamuchira zita pasi iyo inozivikanwa nhasi, University of Erlangen-muNuremberg.
Dzidziso zvoupfumi uye mabhizimisi adhimini, wakange kusvikira nguva ino vakatamba chete zvishoma basa chii ipapo aiva rorusununguko Humanities uye Social Sciences muna Erlangen, aigona ikozvino kuitwa pasi zvikuru pamwero panzvimbo yayo muNuremberg. amalgamation ichi yakaitawo kukura nhamba mudzidzi iyo yaisvika nhamba itsva yepamusoro pamugumo kuma1960.
1966 - The rorusununguko Engineering kunobva
mu 1962, pashure gakava refu, muparamende Bavarian pakupedzisira akasarudza kutanga rorusununguko Engineering muna Erlangen. In iyi, Yunivhesiti akanga akunda kundorwa guta muNuremberg yakanga vachikumbira kuti waishandiswa yunivhesiti hwaizogadzwa muNuremberg kwemakumi emakore.
Sezvo rwakakura nzvimbo kuvaka nyika inodiwa kuti basa iri havana kuwanikwa pakati Erlangen, nheyo nokuda itsva payunivhesiti ritenderane dzakaiswa kumaodzanyemba kumabvazuva kweguta 1964. Wevakadzidza pokugadzwa rorusununguko Engineering, yakazova rechinomwe kodzero panguva FAU panguva, zvakaitika 1966. Panguva ino, Yunivhesiti ndiye chete sangano muGermany aine mano okugadzira rakanga revatema kupinda huripo hurongwa ane dzekare tsvakurudzo yunivhesiti uye kwete kumisa sechinhu yunivhesiti zvionera.
1968 - The mudzidzi kufamba hwapedyo
kuna FAU, sezvaingoitwawo, zvinotevera makore vakanga hunodzorwa mudzidzi sangano, sangano rakanga kuva vakadaro refu-refu migumisiro iri dzingaparwe upenyu. The vechikoro vairatidzira, izvo zvakakanganisa mumayunivhesiti yose Germany, vakanga Pakutanga mhinduro nyaya yakanga setsikawo yunivhesiti-related, akadai murombo kudzidza zvinhu. mu 1969, Mudzidzi sangano akakura okunyanyisa uye akazova nhumbi zvinopesana nevezvematongerwo enyika zvavo. In pamwe nevamwe munzanga mapoka, ichi akakura kuva chii akazozivikanwa mamwe-dzeparamende kupikiswa kufamba.
Paiva nebope guru, kunyanya gakava pamusoro Bavarian Yepamusoro Education Act kuti 1974, zvikamu iyo wakarambidza vamiririri mudzidzi kubva pakuva munhu enyika vakawanda atenderwa, uye pamusoro German Yepamusoro Education Act kuti 1976. Makore aya akauya pamusoro zhinji kushanduka yeYunivhesiti pachena mufananidzo, sezvo tsika dzakawanda refu-yakasimbiswa dzakanga chabvisa. Paiva kugumisa mapurofesa akapfeka gowns uye, mu 1968, kupemberera Day Akatanga kuda, kuti 'anofa academicus', iyo kusvikira panguva yakanga yakaitwa Baroque Runako Redoutensaal, hwakatamisirwa nani zvishoma flamboyant ambience of Auditorium Maximus apo kwakaitika kubvira.
1972 - The rorusununguko Education kunobva
The rorusununguko Education yakatangwa 1972, achiva fakaroti yeYunivhesiti rechisere panguva. Yakakura kubva Institute for Mudzidzisi Training iyo yakatangwa 1956 uye gare gare upgraded mu 1958 kuti ave College of Education muNuremberg, mudzidzisi nokudzidziswa pakoreji, asati ava kodzero panguva FAU. By 2007, Yunivhesiti akanga 11 zvichitaurwawo, sezvo rorusununguko Humanities uye Social Sciences yakakamurwa dzikava mbiri akazvimirira mano uye weVadzidzisi Vedare of Sciences yakati rinoteurwa kupinda vamwe vatatu.
FAU rakawedzera zvikuru mutsva yechando kwetemu 1991/92 apo, kekutanga, rakanga pamusoro 30,000 vadzidzi. Kusvikira pakati namapfumbamwe remakore, kumativi 40 muzana Vadzidzi muChikoro mano ose Theology uye Mutemo, asi kutanga hafu rechipiri remakore rechimakumi maviri guru chikamu kwevanhu mudzidzi vakakweverwa kurutivi kuvatsva anoranga engineering basa rokutarisira, dzezvoupfumi nemagariro sayenzi.
2000 - New okuchinja kutora nzvimbo
Pakutanga kwezana remakore maviri okutanga, University of Erlangen-muNuremberg riri nezvinetso zvitsva. The kuwedzera zvivako pamusoro Südgelände (wokumaodzanyemba kembasi) uye erection kwezvivako zvitsva pakati peguta dziri kuchinja chitarisiko paYunivhesiti. mu 2000, ari Nikolaus Fiebiger Centre Molecular Medicine musi Glückstraße chakatsiva chaimbova chivako wefizikisi uye 2001 akaona Panovhurwa idzva Röthelheim ritenderane pamusoro nzvimbo yekare atirari yemauto. Chikamu chokutanga kuvakwa zvitsva vasiri kuvhiya muzinda yakanga yatanga muna 2002.
The University akakurumidza kushandisa Kuchinja itsva madhigirii Bachelor uye vaTenzi sezvo chairayirwa Bavarian State Ministry of Sciences, Research uye Arts, uye izvi dhigirii zvirongwa chakatsiva yaimbova Diplom uye Magister zvirongwa pakazopera makore gumi.
Uyezve, kuti varambe imwe kukwikwidzana nzvimbo pasi pose uye matambudziko ramangwana, neDare akavhotera pamusoro 7 Kukadzi 2007 kuti vaite misoro zvinhu the University kuti mamiriro. zvakanyatsonakanaka, muchando kwetemu 2007/08, asi mano gumi neimwe kurongwazve kupinda shanu mano izvo University ane nhasi. mano aya Sub-rakakamurwa madhipatimendi pamwe munyika hurongwa yakaitirwa kusimbisa huripo collaborations nokusika zvingangoitika vatsva.
Unoda kurukura University of Erlangen muNuremberg ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of Erlangen muNuremberg pamusoro Map
Photos: University of Erlangen muNuremberg pamutemo Facebook
University of Erlangen muNuremberg wongororo
Join kukurukura pamusoro University of Erlangen muNuremberg.
The University of Greifswald Greifswald
Martin Luther University of Halle-Wittenberg Halle
Charite – Medical University kweBerlin Berlin
University of Ulm University of Ulm